भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान : अगस्ट १५ सम्ममा कोरोना भाइरस खोप तयार उपलब्ध हुन सक्ने
अन्तर्राष्ट्रिय भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान : अगस्ट १५ सम्ममा कोरोना भाइरस खोप तयार उपलब्ध हुन सक्ने
अगस्ट महिनाको १५ तारिखसम्म सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध हुन सक्ने भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् आईसीएमआरले बताएको छ। क्लीनीकल परीक्षण पूरा भएमा अगस्ट १५ अर्थात् भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर यो खोप सर्वसाधारणहरूका लागि उपलब्ध गराउन सकिने आईसीएमआरको भनाइ छ।
आईसीएमआरका निर्देशक डा. बलराम भार्गवले जुलाई २ मा ती १२ संस्थालाई आगामी जुलाई ७ सम्ममा परीक्षणको स्वीकृति लिइसक्नुपर्ने बताएका छन्।
पत्रमा उनले लेखेका छन्, “कोरोनाभाइरस रोक्नका लागि आईसीएमआरले विकास गरेको खोपको परीक्षण तीव्र गतिमा अघि बढाउनका लागि भारत बायोटेक कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको छ।”
“कोरोनाभाइरसको एउटा स्ट्रेन निकालेर यो खोप विकास गरिएको हो।”
“क्लीनीकल परीक्षण पछि आईसीएमआर यो खोप अगस्ट १५ सम्ममा सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउन चाहन्छ।”
“भारत बायोटेक पनि युद्धस्तरमा काम गरिरहेको छ। तर यो खोपको सफलता क्लीनीकल परीक्षणका लागि चुनिएका संस्थाहरूको सहयोगमा निर्भर गर्छ।”
बायोटेक कम्पनी मार्फत विकास गर्न लागिएको खोपको नाम कोभ्याक्सीन हो।
महाराष्ट्र सरकारले बनाएको कोरोना टास्क फोर्सका सदस्य डा. शंशाक जोशी भन्छन्, “यति कम समयमा खोप बनाउनु लगभग असम्भव छ।”
“सामान्यतया एउटा खोप बनाउन दुई वर्ष लाग्छ। निकै छिटो काम गरिए पनि कम्तीमा १२ देखि १८ महिना लाग्छ। त्यसभन्दा अघि नै खोप बनाउने कुरा असम्भव छ।”
स्वास्थ्य विशेषज्ञ र इन्टर्न्याश्नल एसोसिएशन अफ बायोएथिक्सका पूर्वअध्यक्ष डा. अनन्त भान पनि आईसीएमआरको योजनाले छक्क परेका छन्।
उनी भन्छन्, “खोपलाई क्लीनीकल परीक्षणका लागि जुलाई ७ सम्ममा दर्ता गरिसक्न भनिएको छ। भारत बायोटेकले ट्विटरबाट जुन २९ तारिखमा यो खोपको मानव शरीरमा गरिने परीक्षणबारे जानकारी गराएको थियो। खोपको क्लीनीकल परीक्षणका लागि भारतका १२ संस्थालाई चुनिएको छ।